अनुगमनमा कैफियत भेटिए इजाजत रद्द गर्छौं - Karobar National Economic Daily
अनुगमनमा कैफियत भेटिए इजाजत रद्द गर्छौं
query_builderNovember 7, 2017 2:55 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility2213
विश्वबाबु पुडासैनी, महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र नापतौलमा धेरै समस्या देखिने गरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अन्य वस्तु गुणस्तरयुक्त नहुँदा दिनहुँजसो उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । सरकारी अनुगमनले सामानको नापतौल, गुणस्तर र लेबलमा बढी समस्या देखाएको छ । विशेष गरी बेला–बेलामा सिमेन्ट, औषधि, सुनचाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ, ट्याक्सी, ढक–तराजुलगायत अन्य सामानमा गुणस्तर र नापतौलको समस्या आउने गर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले अनुगमनसँगै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ, तर पनि पूर्ण रूपमा यस्ता समस्या नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि गुणस्तरयुक्त सामान उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आएको बताएको छ । विभागले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्नुका साथै सामानको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम गर्दै आएको छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र नापतौलको अवस्था र यसलाई नियन्त्रण गर्न गरेका कार्यक्रमलगायतका अन्य विषयमा विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीसँग कारोबारका लागि लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार ः
हाल विभागले के काम गरिरहेको छ ?
सामानको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने काम नियमित रूपमा गरिरहेका छौं । यी कामको मुख्य उद्देश्य भनेको आन्तरिक बजारमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको प्रवद्र्धन गर्ने र नेपालको आयात–निर्यातलाई गुणस्तरीय बनाउने हो । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने काम विभागले गरिरहेको छ । यीलगायतका अन्य कामलाई विभागले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बजारमा उपभोग्य वस्तुको नापतौल र गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ ?
विभागले जति पनि नेपाल गुणस्तर तर्जुमा गर्छ । ती सबै गुणस्तरहरू स्वेच्छिक हुन्छन् र अनिवार्य हुन्छन्, तर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षाका दृष्टिकोणले मात्र केही मापदण्डहरूलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अहिले १२ वटा वस्तुमा गुणस्तर अनिवार्य गरिएको छ । बजारमा यी वस्तुको गुणस्तरलाई कायम राख्नका लागि विभागले नियमित रूपमा नेपाल गुणस्तर इजाजत प्राप्त वस्तुहरूको उद्योग र बजार निरीक्षण गरिरहेका छ । समय–समयमा कतैबाट गुनासो आउँदा नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौं । हालसम्म हामीले ३ सय उद्योगको नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्नका लागि इजाजत प्रदान गरेका छौं । यी उद्योगबाट उत्पादित उत्पादनलाई नियमित रूपमा गुणस्तर अनुगमन गर्ने काम गरिरहेका छौं, जसबाट गुणस्तरयुक्त वस्तु ढुक्कले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बजारमा सामानको नापतौल र गुणस्तरमा सामान्य समस्या देखिए पनि उपभोग नै गर्न नसकिने अवस्थामा भने छैन ।
नापतौल र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिरहेको गुनासो आइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले के गरिरहेको छ ?
नापतौलको क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजन हुने यन्त्रहरूको परीक्षणको कुरा छ । यसलाई हाम्रा विभिन्न नौवटा कार्यालयमार्फत नियमित रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । व्यापक रूपमा बजारहरू विस्तार भएका छन् । बजार विस्तारसँगै नाप्ने तौल्ने यन्त्रको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ । व्यवसायीले नवीकरण नगरीकन चलाउने गर्दा समस्या आउने गर्छ । उपभोक्ताले पनि सही परिमाणमा वस्तु छ कि छैन भनेर सजक बन्नुपर्छ । हामीले बजारमा नियमित रूपमा शंकास्पद लागेका फर्ममा अनुगमन गरिरहेका छौं । हरेक व्यवसायको कारोबारका अगाडि विभागको उपस्थिति पनि सम्भव हँुदैन, त्यस कारणले व्यवसायी इमान्दार र उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ ।
अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्ने छ नि ?
गुणस्तरहीन उत्पादन गर्ने व्यवसायीको कसैको पसल, सटर बन्द गर्ने, व्यक्तिलाई प्रक्राउ गरेपछि मात्र अनुगमन प्रभावकारी भएको भन्ने बुझिन्छ । कतिपय कुरा त्यो मात्र होइन, हामीले सेवा विस्तार गर्ने, गलत काम गर्नेको सामान जफतसँगै रोक्का गर्ने काम गरिरहेका छौं । विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ । कहिलेकाहीं एकाध केस धेरै त्रृटि गरेका आइरहेका छन् । ती केसलाई तत्काल कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्ने काम भइरहेको छ ।
नापतौलमा नियोजित रूपमा ठगी गरेको अनुसन्धानबाट फेला परेपछि गत वर्ष पाँचवटा केसको मुद्दा दायर ग¥यौं । कतिपय अवस्थामा तरकारी बजारमा ढक–तराजुको नियमित जाँच गराउने गरेको पाइँदैन । त्यस्तो अवस्थामा नाप्ने उपकरणहरू प्रयोग गर्न नदिने र जफतसमेत गर्ने गरेका छौं । बजारमा देखिएको समस्या नियन्त्रण गर्न अनुगमन विस्तार गर्नुपर्ने, कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण ठाउँमा अनुगमन गरेर बजार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा पनि साकार नहोला । उपभोक्ताको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नुका साथै भएका ऐन–नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नापतौलको विषयमा कुरा गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको नापतौलमा समस्या देखिन्छ । त्यस्तै मासुजन्य पसलमा पनि तौलमा समस्या देखिने गर्छ । नापतौलका उपकरणहरू नियमित रूपमा चेकजाँच र नवीकरण नगर्ने समस्या बढी देखिन्छ ।
कति व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन र कारबाही गर्नुभयो ?
दसौं हजारभन्दा बढी व्यवसायीको अनुगमन गर्दा धेरैजसो व्यवसायमा समयमा चेकजाँच नगर्ने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने जस्ता देखिन्छ । ती व्यवसायी बढी कारबाहीमा पर्ने गर्छन् । कम नापतौल गर्ने ग्यास कम्पनी, पेट्रोलियम पदार्थमा बढी समस्या हुने गर्छ । नियोजित रूपमा ठगी गरेका २० वटा मुद्दालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाअनुसार बजार अनुगमको काम भइरहेको छ । विभागबाट पनि ४ सयको संख्यामा अनुगमन गरेका छौं, जसमा नापतौलतर्फ ५० वटा मुद्दा कैफियत पाइयो भने गुणस्तरतर्फ ४० वटा मुद्दा पाइएको छ । यसमा गम्भीर किसिमका त्रुटि भेटिएका केसलाई अदालतमा कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेका छौं । सामान्य किसिमका मुद्दालाई सुधार गर्न निर्देशन दिने, निलम्बन गर्ने, कारोबार रोक्का राख्ने काम गरिरहेका छौं ।
कुन–कुन वस्तु तथा सेवामा गुणस्तर चिह्न कायम गरिएको छ ?
१ हजारको संख्यामा गुणस्तर चिह्न कायम गरिएको छ । यसमा वस्तुको गुणस्तर प्रक्रिया र प्रणालीको गुणस्तर हुने गर्छ । बजारमा विभिन्न ६० किसिमका वस्तुमा अनिवार्य र स्वेच्छिक गरेर गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेका छौं । अनिवार्य गरिएकोमा सिमेन्ट, हाउस वाइरिङ, रड, फलामे डन्डी, सीजीआईसी, जीआईपी पाइप, पीपीसी, एजडीपीपाइप, रेगुलेटर, भल्व आदि छन् । त्यस्तै खाद्य वस्तुहरूमा भटमास, तोरी, सनफ्लावरको तेल, मैदा, दूध, बिस्कुट, ट्रान्सफर्मरलगायतका ६० प्रकारका वस्तुमा गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेका छौं ।
गुणस्तरयुक्त सामान हो÷होइन भनेर सर्वसाधारण उपभोक्ताले कसरी छुट्ट्याउने ?
गुणस्तरयुक्त वस्तु नेपाल गुणस्तरमा तोकिएका उद्योगहरूले एनएस चिह्न प्राप्त गरेर उत्पादन गरेका हुन्छन् । एनएस चिह्न अंकित वस्तुहरू हेरेर उपभोक्ताले ढुक्क भएर प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तो केही गुणस्तर नभएको पाइएमा तत्काल विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ । न्यून तथा गुणस्तरहीन वस्तु दिएको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित उद्योगले नै दिनुपर्छ । उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा एनएस चिह्न छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ ।
बेला–बेलामा सिमेन्टको गुणस्तरमा बढी समस्या देखिन्छ नि ?
गुणस्तरमा समस्या दुई किसिमबाट हुने गर्छ— नजानेर र जानीजानी लापरबाही गरेर । कतिपय वस्तुमा उद्योगले जानीजानी वस्तुको गुणस्तरमा केही ह्रास गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । न्यून गुणस्तरका वस्तुहरू प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट समस्या बढी आउने गर्छ । अघिल्लो वर्ष गुणस्तर नपुगेका सातवटा सिमेन्टको इजाजत रद्द गरेका थियौं । अहिले पनि सिमेन्ट उद्योगमा धेरै अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमनका कैफियत भेटिएमा इजाजतपत्र रद्द गर्छौं । गुणस्तरहीन सामान भेटिएकोमा त्यसको बिक्री–वितरणमा रोक लगाउनुका साथै इजाजतपत्र रद्द गर्ने काम गरिरहेका छौं । नियमनकारी निकाय नपुग्ने साना ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगमा समस्या बढी देखिने गर्छ । सबै उत्पादकको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन, विक्रेता पनि जिम्मेवारी बन्नुपर्छ । विक्रेताबाट पनि कैफियत हुने काम भेटिएको छ । सिमेन्ट झिकेर अन्य बोरामा भरेर कम तौल बनाउने, उपयुक्त ढंगबाट वस्तुको भण्डारण नगर्ने आदि कारणबाट पनि गुणस्तरमा कमी हुने गर्छ । गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेका वस्तुमा ढुक्क भएर वस्तु उपभोग गर्ने वातावरणको स्थिति छ, जसका कारण उपभोक्तामा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छैन ।
गुणस्तर कायम गर्न नीतिगत र कानुनी समस्या छन् ?
गतिशील डकुमेन्टका रूपमा गुणस्तर चिह्न तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । समयअनुसार मापदण्डमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । त्यसतर्फ पर्याप्त जनशक्तिको कमी हुनु तथा निजी क्षेत्रमा त्यस किसिमको क्षमता विकास र सचेतना कमी हुनुले पनि केही पछाडि परेका छौं । बढीभन्दा बढी सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा राष्ट्रिय गुणस्तर तर्जुमा गर्न कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यक्रमहरू रहेका छन् । ऐन–कानुनमा नापतौल र गुणस्तरमा दण्ड–जरिवानालाई समसामयिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं । यसलाई परिमार्जन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । राज्यको पुनर्संरचनासँगै ऐनहरू पनि परिमार्जन गर्ने क्रममा हुन्छन् । गुणस्तरसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालय पठाइसकेका छौं । नापतौल ऐनको मस्यौदा तयार गरी छलफलका क्रममा छ । यसलाई मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारीमा छौं ।
आयातित सामानको गुणस्तरको समस्या कत्तिको छ ?
अनिवार्य गुणस्तर चिह्नका लागि हामीले गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेका वस्तु मात्र आयात गरिरहेका छौं । सम्बन्धित देशका उत्पादनले गुणस्तर कायम गरेर मात्र सामान पठाउने गर्छन् । त्यसलाई अनुगमन पनि गरिन्छ । गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तुहरू ११ वटा छन्, जसमा तीन किसिमका सिमेन्ट, डन्डी, जिआई वायर, हाउस वाइरिङ तार, एलपीजी सिलिन्डर रेगुलेटर, भल्व तथा ड्राइसेल ब्याट्री रहेका छन् । यी वस्तुहरू गुणस्तर कायम गरेर मात्र आउँछन् । अन्य वस्तुमा जुन देशका उत्पादन जस्तो छ, त्यस्तै आउने गर्छन् । कतिपय वस्तुको गुणस्तरमा पनि छनोट हुन्छ । सामानको गुणस्तर फरक–फरक हुने गर्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्नैपर्ने अवस्थामा त्यसलाई नियमन गर्छौं । अन्यको हकमा स्वेच्छिक रूपमा इजाजत पत्र नलिएर पनि व्यावसायिक रूपमा व्यापारीले बेच्न सक्छन् ।
कति ग्यास उद्योगले गुणस्तर चिह्न लिए ?
अहिलेसम्म १२ वटा ग्यास उद्योगमध्ये चारवटाले गुणस्तर प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । अन्य उद्योगले भने लिने क्रममा छन् । गुणस्तर चिह्न लिन बाँकी रहेका उद्योगमा अनुगमन गरिरहेका छौं । एलपीजी ग्यास उद्योग संघलाई तत्काल प्रमाणीकरण नगराए कारबाहीमा जान्छौं भनेर जानकारी गराइसकेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको अनुगमन गरिरहेका छौं ।
उत्पादकले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा कच्चापदार्थको प्रयोग हुन्छ त्यसको प्रशोधन गरेर फिनिस उत्पादन बनाइन्छ । गुणस्तरयुक्त कच्चापदार्थ प्रयोग गरिनुपर्छ । उत्पादनको प्रशोधन ठीक ढंगबाट भएको छ कि छैन, त्यसको निरीक्षण गरिनुपर्छ । उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गरेर बजारमा पठाउन सकिन्छ । गुणस्तर चिह्न लिने क्रममा पनि एनएसमा भएको आवश्यकतालाई समेटेर उद्योगीले कच्चापदार्थ निर्धारण गर्ने, यस्ता वस्तु उत्पादन गर्दा प्रविधिमा कुनै कमीकजोरी छ–छैन ध्यान दिने र उत्पादित वस्तुको परीक्षण गरेर मात्र बजारमा पठाउने काम उद्योगले गर्ने गरेका छन् ।
ट्याक्सी मिटरमा धेरै समस्या देखिने गरेको छ नि ?
ट्याक्सीमा मिटर अनिवार्य गरिए पनि मिटरमा नहिँड्ने समस्या धेरै छ । विभागले ट्याक्सीको मिटर जाँच गरे पनि मिटरमा नहिँड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले सारथि भन्ने ट्याक्सी आएको छ, जुन मिटरमा मात्र हिँड्ने गर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धी ट्याक्सी आएको अवस्थामा यस्ता किसिमका गलत प्रवृत्ति राख्ने ट्याक्सीहरू बिस्तारै विस्थापित हुँदै जान्छन् । भाडामा नहिँड्ने ट्याक्सीलाई प्रहरीले अनुगमन गरिरहेका छन् । विभागको अनुगमनबाट १ प्रतिशत ट्याक्सीमा मात्र कैफियत देखिने गरेको छ । ट्याक्सीमा मिटर सही हुने तर मिटरमा नहिँड्ने समस्या धेरै हुने गरेको छ ।
गुणस्तर र नापतौल क्षेत्रलाई लक्षित गरेर के–के नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
नयाँ–नयाँ वस्तुको गुणस्तर तर्जुमा गर्ने र पुराना गुणस्तरलाई परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेका छौं । अहिले पनि २५ वटा वस्तुको गुणस्तर परिमार्जन गर्ने क्रममा छौं । ग्यास पाइप रबरको मापदण्ड आउने क्रममा छ । हाउस वाइरिङ तारको गुणस्तर परिमार्जन गर्ने क्रममा छौं । त्यस्तै सिमेन्टको गुणस्तर परिमार्जन गर्दै छौं । विद्युतीय सामान, रेफ्रिजेरेटर, एयर कन्डिसनको मापदण्ड तयार गर्ने काम भइरहेको छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्दै छौं । यसका लागि अत्याधुनिक उपकरणहरू खरिद गरिसकेका छौं । निकासी व्यापारलाई कसरी मद्दत गर्ने भनेर प्रयोगशालाको प्रमाणीकरण गराउँदै छौं । नेपालको पस्मिनाको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न लागिरहेका छौं । निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा हल मार्कको नमूना तयार गरेका छौं । खाद्यान्न प्याकेजिङका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने क्रममा छौं । त्यस्तै ट्याक्सी मिटर नयाँ उपकरणहरू जडान गरिएको छ । ऐन–कानुन परिमार्जन गर्न लागेका छौं । आगामी दिनमा विभागको संगठन विस्तार गरी प्रभावकारी ढंगले सेवा विस्तार गर्दैछौं ।
उपभोक्ता सुनचाँदी सिमेन्ट गुणस्तर नापतौल